Umdlalo crackers, Party zomlilo, Cold zomlilo, Stage zomlilo - Wanfu
Thina nakho kwiimveliso kumazwe amaninzi awahlukeneyo. Zonke iimveliso zethu zenziwa zingqinelane umgangatho kwindawo ezifana AFSL UMGANGATHO kunye IMIMISELO CPSC American, BS7114, EN15947.
Ngaphambi ukuthunyelwa, sisenza inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho: Ukususela izinto Ukulungiselela ivale wokugqibela ibhokisi. Siza ubuze nkqubo yonke ukuthintela iingxaki uze uzame ukuqinisekisa umgangatho ophezulu.
Thina mveliso zethu. kodwa wonke umntu uyazi, ukuba imisebenzi iye iimveliso ezininzi ezahlukeneyo. Ngoko ke kufuneka urhwebo ezinye kwezinye mveliso. Kodwa ke, siya khetha mveliso ezilungileyo kumisa iqela lethu umthombo olungileyo.
Abasebenzi abaqeqeshiweyo ingongoma eyintloko.
Abasebenzi bethu bawo baqeqeshwe kakuhle kwaye anxibelelane ngokutyibilikayo nawe ukuze iimfuno bakho kuqondwa ngokupheleleyo ngaphandle iziphene yabangela kwaye iya kwenza odola iifireworks bakho amava lula nobumnandi.
Injongo yethu kukuba siqhubeke sikhula iimveliso ezintsha entsha kwimarike ehlabathini lonke, ndibanikele kuni kunye namaxabiso aphezulu umgangatho kwaye kakhulu kukhuphiswano.
Liuyang Wanfu zomlilo Co., Ltd. kuyinto professional imisebenzi umenzi kunye kumazwe angaphandle, elise Liuyang, China. Thina mveliso imisebenzi amabini omnye mveliso yoshicilelo nokupaka. Le imisebenzi mveliso kufuneka kwiminyaka engaphezu kwama-15 zokuvelisa amava. Saseka iqela elungileyo iimveliso asakhasayo, ukuyila, ushicilelo, ekuveliseni, ulawulo olusemgangathweni, ukugcinwa kunye selling.We ikakhulu bavelise kwaye bathengise iintlobo ezahlukeneyo umlilo: ezifana ukubonisa nomthengi nemiqhathane, Magic ukudubulana, amakhandlela baseRoma, spinners Ground, ntaka, yomlilo zethoyi, imithombo, zokudubula iqokobhe, Birthday ikhandlela, elingatshaywayo isigaba izitakantlantsi ...
LIUYANG WANFU IZITAKANTL CO., LTD.
LIUYANG WANFU ETHUNYELWA IZITAKANTL Factory
LIUYANG HEXIE upakishe WOKUPRINTA mveliso
Dibanisa Office: 5F, Block C1, New Moon Peninsular, Jiangjun Road, Liuyang, Hunan, China
Factory1 Dibanisa: Qucheng Village, Chengtanjiang Town, Liuyang, Hunan, China
Factory2 Dibanisa: Hehua Industrial District, Yangjianong, Liuyang, Hunan, China
UMNXEBA: + 86-731-83821899
IFAKSI: + 86-731-83821288
Website: www.wanfufireworks.com (IsiNgesi)
Name Ihlokondiba Email
lancymi (Intengiso) +86 13307313982 sale8@wanfufireworks.com
UJoanna (Intengiso) +86 13974918916 sale6@wanfufireworks.com
Wella (Intengiso) +86 13974918996 sale5@wanfufireworks.com
Lisa (Intengiso) +86 13975842992 wf@wanfufireworks.com